Danjire James Swan oo war kasoo saaray weerarkii Al-Shabaab ee xarunta QM Muqdisho - Awdinle Online
Danjire James Swan oo war kasoo saaray weerarkii Al-Shabaab ee xarunta QM Muqdisho
The UN Secretary-Generals Special Representative for Somalia, James Swan addresses Ugandan soldiers serving with the United Nations Guard Unit (UNGU), during a medal award ceremony in Mogadishu to mark the completion of their tour of duty in Somalia, on 16 July 2019. UN Photo / Ilyas Ahmed
October 13, 2019 (AO) – Ergayga gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Danjire James Swan ayaa cambaareeyey weerarkii madaafiicda ahaa ee Maanta lagu qaaday xarunta Qaramada Miidobay iyo AMISOM ee Magaalada Muqdisho ee loo yaqaan Xalane.
War saxaafadeed uu soo saaray ayuu ku sheegay in saacadda Muqdisho markay aheyd 1:15 pm uu dhacay weerarkaan madaafiicda ayna kusoo dhaceen gudaha Xarunta UN-ka iyo AMISOM gaar ahaan qeybta tas-hiilaadka ayna ku dhaawacmeyn dhawr qof.
“Waxaan aad ula yaabay ficilkaan argagaxa leh ee lagula kacay shaqaalaheenna, kuwaasoo shacabka Soomaaliyeed kala shaqeeya arrimaha samafalka, dhismaha nabadda, iyo arrimaha horumarinta” ayuu yiri James.
“Nasiib wanaagse, inbadan oo shaqaalaheenna ah wax cabsi ah kama qabaan. Waxaan u rajeynayaa asxaabteena dhaawacmay inay si buuxda uga soo kabsadaan dhaawacyadooda” ayuu sii raaciyey.
“Wax marmarsiiyo ah looma sameyn karo weerarkaan naxariis darrada ah, Qaramada Midoobayna waxaa wali ka go’an inay Soomaaliya ka taageerto jidkeeda nabadda, xasilloonida iyo horumarka.” Ayuu kusoo gabagabeeyey.
Warkaan kasoo baxay Xafiiska Qaramada Midoobay ee Muqdisho ayaa khilaafayo Wararka aan ka helnay ilo-wareedyo amni oo ku sugan gudaha xarunta Xalane oo sheegaya in qaar ka mid ah madaafiicda ay ku dhaceen isbitaalka ciidamada Amisom ee ku yaalla gudaha xarunta Xalane.
Madaafiicda ayaa waxaa ku dhintay laba qof oo Soomaali ahaa, oo isbitalka u doontay adeeg caafimaad, waxaana ku dhaawacmay 6 qof oo kale. Qaar ka mid ah dadka dhaawacmay ayaa waxaa ku jira askar ka tirsan ciidamada Amisom.
Previous articleS.R.S.G SOMALIA CONDEMNS ATTACK ON UN AND AMISOM COMPOUNDS IN MOGADISHU
Next articleWhy Somalia stands with Turkey over Arab League resolution